Silicon - lokhu ingenye sezici ezibaluleke kakhulu emzimbeni wethu. Ngo ukubaluleka kwalo kulandela ngokushesha ngemva umoya-mpilo. Ngaphandle-ke awusakwazi ukwenza noma isidalwa esiphilayo. Silicon ehilelekile nokwenziwa icubungula nosawoti ezingaphezu kuka ayisikhombisa ezahlukene amaminerali namavithamini. Ukhuthaza ukukhula amathambo iphinde ivimbele kwamathambo, kuvusa izivikeli mzimba. Sitholakala unwele lomuntu kanye nezinzipho.
Ukuncishiswa senani ku ezicutshini kungabangela umonakalo semithambo, ukuphazamiseka ithambo izicubu. Yingakho kufanele ibe Silicon e imikhiqizo esikudlayo nsuku zonke. Uma alwanele, kwehle digestibility kwabaningi izakhi mkhondo calcium, ayibe, insimbi, fluorine, manganese, kanye nezinye - ngaleyo ndlela iphazamisa umzimba. Ngu Imiphumela Silicon ukuntula in noma ukudla okungenamsoco, noma izimuncagazi ezihlala kule amaphesenti umzimba ayisishiyagalolunye abantu. Uyakwazi ukuhlukana emzimbeni izimuncagazi kancane futhi amagciwane, yokuxhuma nabo compounds eziyinkimbinkimbi, iziphi ke ukuboniswa angesabi. amagciwane amaningi esibulalayo nesikhunta zingenzeka uma ekudleni kwakho akuyona silicon. Nokudla okudlayo kufanele kuqukathe okungenani 3-5 amagremu. ngosuku timphawu. Uma ufuna kujwayeleke okuqukethwe emzimbeni - kufanele kuqala balahle izimuncagazi, ngoba eziningi zazo zidla lesi sici. Futhi kuphela abese eqala ukudla ukudla okunothe Silicon, zezinkambi engamakhambi namanzi. Futhi ngaleso sikhathi uye neqhaza kakade ukuze ahlanze umzimba namagciwane abangela izifo.
Lokhu kuyasiza kakhulu ngoba umzimba isici - Silicon - kwimikhiqizo wakwa kabanzi emelelwa. Kuyinto samanje cishe zonke ukudla nge imvelaphi isitshalo, kuhlanganise iwayini ubhiya. Inqwaba kuqukethwe ilayisi, unyaluthi kanye oats. Lapho okusanhlamvu melyat, it is nahlanza kusuka kumasistimu asebenzayo, futhi umkhiqizo ngokushesha ilahlekelwa ingxenye enkulu yalo isici esibalulekile. Futhi eziqukethwe izikhumba izithelo eziningi kanye nemifino, kuyilapho e-iphathwa kuncane kakhulu. Lapha, njengoba umthetho, abantu ibhekene uxakekile - ngoba izithelo unpeeled nemifino wathenga esitolo, elaligcwele nswi nitrate ngoba bajwayele ukunweba ukuphila eshalofini. Ngakho, ukudla okunothe Silicon: omnyama isinkwa, bran, ufulawa, ukudla, i-oats, imbewu sunflower, amazambane "edlubhe", imifino, bell pepper, turnips, utamatisi, iJerusalema artichokes. Ezinye lamanzi esiphethu ezingavamile kakhulu, nezitshalo zasolwandle kanye ulwelwe kungabuye kulolu hlu. Ukuze umzimba umunce i-silicon ekudleni kwakho kumelwe kube khona potassium, magnesium, i-calcium ne-manganese. Inyama kuvimbela ukumuncwa yayo. Ngakho-ke, naphezu kweqiniso lokuthi okuqukethwe Silicon e imikhiqizo zasolwandle kuphezulu, they ncisheka cha fanele ukuba imithombo zakhe ezinhle.
Vegetable amaprotheni, wezokudla fibre, okuyinto izithelo nemifino, umsize ukuba abe ingxenye. Isinxephezelo yokuntuleka kungaba amanzi ukulungele ngokukhethekile.
Cosmetology Kubalulekile ukuthi Silicon ekhona imikhiqizo yakho nsuku zonke Ukudla. Yena rejuvenates isikhumba, kwenza izinzipho izinwele eqinile futhi shiny.
Amanzi ukupheka nje. izinsuku eziyisikhombisa kuyadingeka ukuze bagcizelele amatshe silicic emanzini, bese sokukhipha ke kunoma iyiphi izitsha, kokushiya kwenze kwaba engasebenziseki (4 cm). Khona-ke uhlanze ibhulashi kubo, futhi waphinda zilungele ukusetshenziswa.
Itende ukunikeza - insindiso yakho ashisayo usuku ehlobo
Primary ukwelashwa arthrosis ngezinyawo kanye nokuvinjelwa